Izindaba - Ungalwenza Kanjani Uhlelo Oluhle Lokugaya Ufulawa Kukhiqizwa Kofulawa
Ungalwenza Kanjani Uhlelo Oluhle Lwebhizinisi Lokusanhlamvu Kukhiqiziwe
Imishini yokugaya ufulawa ethuthuke kahle ilethe ushintsho ezitshalweni zokugaya ufulawa, emakethe kafulawa eChina. Isitshalo esikhulu sokugaya ufulawa sibonakala sithathe ingxenye enkulu, futhi hhayi nje ngenxa yokukhiqiza okuphezulu, banecebo lebhizinisi lempuphu eliyinkimbinkimbi kakhulu kunezinye. Uhlelo lwebhizinisi oluhle alulona ilungelo lezimboni ezinkulu, izitshalo zokugaya ufulawa ezincane neziphakathi nazo zingenza okufanayo futhi zizuze nakuzo. Njengoba amacebo amakhulu okugaya ufulawa engacaciswa kabanzi futhi aphelele, amathiphu alandelayo avela efektri eyodwa ephezulu yokugaya ufulawa eChina.
Imishini yokugaya ufulawa
1. Ukulawulwa kwekhwalithi kakolweni wakho wezinto ezingavuthiwe: setha ithimba lokuthengwa kwempahla ukufuna ukolweni ongahlangabezana nezindinganiso zakho zokukhiqiza. Isibonelo-izinsalela ze-pesticides ziyisici esibalulekile.
2. Inqubo ekhiqizayo yokulawula: ukulinganisela umphumela wokuhlanza ngaso sonke isikhathi, yenza ukuzimisela kobungcweti nobumhlophe bezinga likafulawa, ukuqapha ukusebenza kwabasebenzi ukuvimbela amaphutha wemishini engadingekile nezinkinga zokuphepha.
3. Isinyathelo ngasinye sokwenziwa emakamelweni ahlukene, ngaleyo ndlela kungavinjelwa ukungcoliswa okuvela kwenye indawo.